Taxi-be eto an-dRenivohitra : hihatra amin’ny 6 septambra ny 500 Ar (NewsMada) | AEMW
Taxi-be eto an-dRenivohitra : hihatra amin’ny 6 septambra ny 500 Ar (NewsMada)
Tsy maintsy hisondrotra ny saran-dalan’ny taxi-be eto an-dRenivohitra na tsy nihatra indray aza, omaly. Azo antoka fa hiantraika any amin’ny fidiram-bolan’ny isan-tokantrano izany sady fotoana fidiran’ny mpianatra rahateo.
Nihemotra fanindroany! Nanambara voalohany ny fiombonan’ny mpitatitra eto an-dRenivohitra (UCTU) fa hanondrotra ny saran-dalan’ny taxi-be ny fiandohan’ny volana aogositra teo. Nahemotra ny 26 septambra izany, satria nolazain’izy ireo nitsinjovana ny mpianatra nanala fanadinana teo. Omaly, tsy nihatra indray io fepetra io, fa hahemotra amin’ny 6 septambra indray. Mihatra kosa anefa ny saran-dalana ho 500 Ar, satria tsy misy intsony (na hatreto) ny fanampiana ara-bola omen’ny fanjakana.
Efa notaterinay teto fa tokony hihena ny vidin-tsolika satria tafidina manodidina ny 39 dolara ny vidin’ny iray barila raha ny fiandohan’ny volana aogositra teo (fandrihana iray volana ny solika), ka raha ampiharina tokoa ny tena vidin-tsolika, tokony hita taratra amin’ny vidiny ho an’ny mpanjifa izany.
Tsy mihatra mivantana
Miovaova isan’andro ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam- pirenena. Iray volana farafahakeliny kosa ny fampiharana azy ho an’ny mpanjifa. Tsy hita mihatra mivantana anefa ireo, fa miankina ny fanapahan-kevitra avoakan’ny Ofisy malagasy mandrindra ny vokatra ara-tsolika (OMH). Ankoatry ny vidiny any am-potony, iankinan’ny vidiny ho an’ny mpanjifa sy ny firenena tsirairay avy koa, ny sandan’ny Ariary mihoatra amin’ny dolara. Tsy nihetsika firy koa anefa io fifandanjana io eo amin’ny tsenam-bola (Mid), manodidina ny 2.900 Ar hatramin’ny 3.000 Ar ny sandan’ny 1 dolara.
← Fiaraha-miasa : mpianatra 31 nahazo vatsim-pianarana ho any Sina (NewsMada)
Trafika sokatra : mitaky ny famaizana mafy ny AVG (NewsMada) →